OWASP Top 10 Meel Feejignaan ah ee Ammaanka Codsiga - ITS Tech School
OWASP Top 10 Xaaladaha Khatarta ah ee Ammaanka Codsiga
OWASP - ama Mashruuca Ammaanka Codsiga Codsiyada ee Furan - waa koox awood leh oo aan faa'iido doon ahayn in qaababka ugu habboon ee loo dejiyo iyo xeerarka qorsheynta, samaynta, abuurista, iyo hirgelinta codsiyada shabakada nabdoon. OWASP Top 10 waa mashruuc hadda oo mar labaad, ka saaraya burburinta waxyaabaha ugu sarreya 10 si ay ula macaamilaan, iyada oo la raacayo noloshii horumarinta wax soo saarka si loo damaanad qaado in codsiyada websayddu ay ka badbaado meel ka bilaabanta hore.
Xakamaynta Tiknooloojiyada ee Tobanaad ee OWASP 2016 waxay soo jeedineysaa burburka meelaha ugu muhiimsan ee 10 ee Ammaanka Dalbashada oo loo baahan yahay in laga fekero mashruuc horumarineed ee wax soo saarka. Codsiyada barnaamijyada aan amniga ahayn waa wax aan faa'iido u lahayn dibad-baxyada. Hirgelinta amniga dalabka shabakadda waa baahida ugu wayn ee mashaariicda horumarinta waxsoosaarka, iyo kooxda dadka ee OWASP waxay ka caawisaa injineerada inay ka helaan khaladaadka dadka kale, sidaa darteed waa inay ogaadaan khataraha ugu xoogan iyo khatarta.
Halkaan waxaa lagu kala soocayaa iyadoo loo marayo codsi muhiim ah oo qayb ka mid ah tilmaamaha ay tahay in lagu tixgeliyo injineerada inta ay sameysey codsiyada:
Nidaamka Sixitaanka Qodobbada iyo Logging
Hubi Nabadgelyada sida ugu dhaqsaha badan iyo inta badan ee suurtogalka ah
Xaqiijinta dhammaan gelitaanka
Hirgelinta Aqoonsiga iyo Xakameynta Aqoonsiga
U isticmaalka Maktabadaha Amniga iyo Qaababka
Ka reebista iyo Khatarta Khatarta
Iyadoo la tixgelinayo mid kasta oo ka mid ah fikradahaas, injineerada internetka waa inay sameeyaan baaritaan taxadar leh kadibna sii wadaan inay sii dhistaan ​​codsigooda alaabta. Shahaadada OWASP laga soo bilaabo diyaargarowga loo qorsheeyay in uu diiradda saari karo jidka loo maro injineerada si ay u sameeyaan doorka ugu wanaagsan ee damaanad qaadka sugnaanta alaabteeda wax soo saarka
Get Security Training & Certification
Astaamaha Horumarka ee Microsoft Dynamics AX 7